Halka lagu hayo Roobow oo la ogaaday iyo dagaal ka socda BAYDHABA - Caasimada Online
Home Warar Halka lagu hayo Roobow oo la ogaaday iyo dagaal ka socda BAYDHABA
Halka lagu hayo Roobow oo la ogaaday iyo dagaal ka socda BAYDHABA
Baydhabo (Caasimada Online) – Dagaal ayaa lagu soo warramayaa inuu ka socdo magaalada Baydhaba ee xarunta gobolka Bay halkaasi oo maanta lagu xiray Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur.
Dagaalka ayaa billowday saacado kadib markii ciidamo ka tirsan dowladda oo garab ka helaya ciidamada Itoobiya ay xireen Roobow.
Dhanka kale is-gaarsiinta magaalada ayaa hawada laga saaray, waxaana mararka qaar la maqlayaa is rasaaseyn dhax mareysa ciidamo taabacsan wadaadka Mukhtaar iyo ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya oo dhinac ah.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in wadaadka hada lagu hayo garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo, loona soo wado magaalada Muqdisho.
Wararka ayaa intaasi waxaa ay ku darayaan in wafdooyinka qaar ee magaalada shacab fara badan ay isugu soo baxeen, kuwaas oo doonaya in wax ay ka ogaadaan waxa ka jira gudaha magaalada, ayada oo qaarkood ay carreysan yihiin.